Chọrọ na-eto eto mma #herbs afọ a? Anyị Amy nwere ụfọdụ oké echiche maka
Na-eto eto herbs bụ a na-ewu ewu na-enwe ntụrụndụ nke osi ite na Gardeners myiri. M pụtara onye na-adịghị n'anya echiche nke na-eje ije n'ime gị n'azụ ụlọ na ihe ubi ọ bụla ogwu gị mkpa gị Ezi ntụziaka ọhụrụ site na ubi? Otu n'ime ihe ndị kacha mma ihe banyere herbs bụ na ha dị nnọọ ala mmezi osisi, nke na-eme ...
Ọtụtụ Best House Plants
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ osisi nwere ike igwu a ọcha ikuku, n'ụzọ dị irè wepu ọrụ nke ime ụlọ mmetọ, ma ndị ọhụrụ rụzigharịa ụlọ doro chemical mmetọ, aloe, Chlorophytum, Sansevieria na osisi ndị ọzọ bụ ndị kasị dị irè eke deodorant. NASA ọkà mmụta sayensị na mgbe afọ 20 nke r ...
More posts banyere na-eto eto herbs
site ha na 18-03-05
The na-eri ego nke na-eto eto herbs n'ogige Ihicha oregano: Ụkwụ na Ụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka Plant extra dil maka swallowtail butterflies Anyị mmasị basil iche
Fatịlaịza n'ihi ogwu ubi containers
Herbs toro na containers ga-achọ ihe fatịlaịza karịa ndị toro n'ogige. Nke ahụ bụ n'ihi na ha enweghị ụzọ juputa nri ha na-eji dị ka ha na-eto. Ma echegbula, ị na-adịghị ịzụta ihe ọ bụla fancy fatịlaịza kpọmkwem maka gị containers, i nwere ike iji otu fatịlaịza ...
Fatịlaịza n'ihi ogwu na ubi
Mgbe ọ na-abịa na-eto eto na gị onwe gị ike nri, ọ bụ ihe kacha mma iji eke, organic nri. M maara organic ugbo nwere ike uda egwu, na ndị na-achọkarị iru maka chemical stof n'ihi na o yiri mfe. Ma na-arụ ọrụ na uwa, na iji organic fatịlaịza n'ogige bụghị naanị ike ...
Elu àgwà ifuru ahịa
Taa, Shandong Jinan erhuanxi ụzọ jupụtara na fu Lai ifuru ahịa. Ọtụtụ ndị na ọbụna ndị ọbịa na-enuga na-ahọrọ na-azụta okooko osisi. MS xue na ezinụlọ ya na-ahọrọ na ịzụta okooko osisi. Mgbe a "bargain", MS xue azụ efere ego osisi, abụọ efere urukurubụba orchid, isii 10 azaleas. Sh ...
Olee otú na-eji na ifuru akụwa? The nzọụkwụ ke ifuru akụwa
People n'anya okooko osisi na ifuru ozuzu na ụfọdụ oge, ga na efere ahụ okooko osisi ọrụ, na-emekarị na efere ga-mụụrụ na osisi-ajụ oyi, n'oge na spring oge ọgwụgwụ nke February ka n'oge njem, nakwa dị ka mbubreyo dị ka mmalite nke April, ọtụtụ osisi metabolism bụ ngwa ngwa, na t ...
Good ite seedling efere si ihe oge osisi?
Qingdao Bo nnọọ transplanting et fitow ụlọ ọrụ & ahia co., LTD., Mmalite transplanting, na nkenke wilting nkịtị. Tumadi n'ihi na nke transplanting mgbọrọgwụ usoro ọzọ bụ ma ọ bụ na-erughị ga-emetụta mgbe, mgbe transplanting, ka jụụ, ventilated ebe ngwa ngwa seedlings na a ụbọchị ole na ole ca ...
Ọtụtụ Best Nursery Plants
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ osisi nwere ike ikuku dị ọcha, n'ụzọ dị irè na-ewepụ mmetụta nke ime ụlọ mmetọ, ma na ọhụrụ decorating ụlọ site chemical mmetọ, aloe vera, bracketplant, sansevieria osisi bụ otu n'ime ndị kasị dị irè eke Efrata. NASA ọkà mmụta sayensị na mgbe ihe karịrị 20 afọ ...
The pụtara nile di iche iche nke okooko osisi
Tulip ịhụnanya nkwupụta, nsọpụrụ, ngọzi, ebighi Tulip (Purple)-adịghị agwụ agwụ ịhụnanya, n'anya Tulip (ọcha) ọcha, dị ọcha Tulip (pink) mara mma, ịhụnanya, obi ụtọ Tulip (Red) Ịhụnanya nkwupụta, ọṅụ Tulip (edo edo) magburu, akụ, akụ na ụba lily ezigbo, niile chọrọ emezu, na-agọzi senti lily ọcha, ọgaranya, agbamakwụkwọ ...
Nke 1, Jinlin Road, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China